Jidka isku xira Ceelbuur iyo Dhuusamareeb oo la furayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay in howl-gal ay ka sameeyeen gobolka Galgaduud ay ku qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi.
Wararka ka imaanaya halkaasi ayaa sheegaya in ciidamadan iskaashanaya ay shalay gelinkii dambe weerar ku qaadeen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada Ceel-Buur ee gobolka Galgaduud halkaasi oo la sheeegay in ay ka baxeen xarakada Al-Shabaab.
Ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Dowlada Itoobiya iyo Ciidamo kale oo Soomaali ah ayaa ka baxay dhinaca Magaalada Dhuuso Mareeb waxa ayna ciidamadan ujeedkoodu yahay in ay isku furaan Wadooyinka xariiriya Dhuuso Mareeb iyo Ceel-buur.
Sida aan Wararka ku heleyno Ciidamo katirsan Itoobiya oo iyagana kasoo baxay dhinaca Degmada Ceel-buur ayaa uruqaansaday deegaano katirsan Degmadaasi ay gacanta ku hayaan Dagaalyahanada dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.
Ciidamada Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay baneeyeen deegaano ku dhaw dhaw degmada Ceel-buur uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Garable, waxaana lasoo sheegayaa Ciidamadii Shabaab ee halkaasi ka baxay in ay aadeen dhinaca Degmada Gal-hareeri.
Korneyl Maxamed Kaariye Caraale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolkaasi ayaa sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen deegaanno hor leh oo ay Al-shabaab horay uga arrimin jireen kuwaasi oo uu shaaciyay in ay baneeyeen Al-Shabaab.
“Waxaan joogaa meel la yiraahdo Laamo iyo Laamo holol iyo meel kale, waxaana la kulannay qeybaha kala duwan ee bulshada.” ayuu yiri Kornel Maxamed Kaariye Caraale.
Dhaqdhaqaaqan ayaa kusoo beegmay xilli uu dhawaan madaxa Alshabaab u qaabilsan gobolka Galgaduud, Sheekh Xasan Yacquub Cali oo wareysi siiyay Idaacadda Alshabaab ee Andalus uu sheegay in ciidanka Itoobiya ee Ceelbuur ku sugan ay wajahayaan xaalad adag kadib markii sida uu yiri Alshabaab saareen go’doomin raagtay islamarkaana shacabkii deganaa ay magaalada ay barakaceen.